आज कार जानिन्छ - यो एक लक्जरी तर वास्तविक आवश्यकता र कहिलेकाहीं एकदम ठिक छ। यो आधुनिक वाहन हरेक वर्ष थप महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू undergo गर्न, आफ्नो उपकरण र प्राप्त थप र थप नयाँ सुविधाहरूमा पूर्ण। तर, धेरै नवाचारै बावजुद, मोटर चालकहरुलाई अझै पनि कहिले काँही जो संग कुनै पनि मा-बोर्ड कम्प्युटर सक्ने छैनन् सामना गर्न, केही मार्गदर्शन प्रक्रियाहरु प्रदर्शन छ। एक यस्तो घटनाहरू - टायर। आफ्नो हात काम कार हरेक मालिक, धेरै मानिसहरू कर्मचारीहरु SRT को हात मा आफ्नो वाहन सौंपन रुचि छैन हिम्मत गर्छन्। तर गर्मी टायर चाँडै आपतकालीन अवस्था मा पाङ्ग्रा हटाउन, उदाहरणका लागि, जाडो गर्न प्रतिस्थापन गर्न वा आदेश, त्यहाँ सजिलै पैसा धेरै भुक्तानी गर्न कुनै आवश्यकता छ। कति कुनै पनि क्षति लागि तयार हुन र कोष को एक महत्वपूर्ण भाग संरक्षण गर्न, आफ्नो हातले एक आत्म-गरे टायर प्रदर्शन गर्न सिक्न बुद्धिमानी।
तर कार्यहरू हेर्नुहोस् को एक प्राविधिक बिन्दु बाट कार को पाङ्ग्रा तोकिएको छन् के विचार गर्न सुरु गर्न।
एक कार टायर को मुख्य उद्देश्य
वाहन टायर यी संरचनात्मक भागहरु को निर्माण, र रबर बेलुन। एकै समयमा गर्दा चला टायर महत्त्वपूर्ण कार्य को एक नम्बर प्रदर्शन:
- तिनीहरूले कम गर्न र कहिलेकाहीं पूर्ण कंपन र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मान्छे को लागि विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ जो कुनै न कुनै सडक, ड्राइभिङ कारण मिसिन को झटके अवशोषित;
- शक्ति समान रूप ड्राइभर र यात्रु को सहज ड्राइभिङ बढावा जो वितरण गरिएको छ,;
- कार अधिक विश्वसनीय को बाटोको निम्ति पालना टायर धन्यवाद;
- मिसिन साइड गर्न तर्फ देखि wobble गर्दैन, र सजिलै उत्प्रेरित गर्छ।
हामी आफ्नो हात संग टायर यस्ता काम को सुविधाहरू विस्तार छलफल अघि, तपाईं कार टायर को सबै प्रकार अन्वेषण गर्नुपर्छ। साथै, यी विभिन्न तत्व पनि structurally, यो पनि उल्लेख गर्न महत्त्वपूर्ण छ भनेर हो।
डिजाइन सुविधा र टायर को प्रकार
व्यावसायिक चालक मात्र होइन तर साधारण मोटर चालकहरुलाई थाहा पाङ्ग्रा को विकल्प - धेरै महत्त्वपूर्ण पाठ। यस टायर को संरचनात्मक सुविधाहरू आधारित, यो निम्न नमूनाहरू आवंटित निर्णय:
कोठामा। यी पाङ्ग्रा को टायर भित्र विशेष रबर तत्व छ। साथै, डिजाइन पनि यस्तो मुख्य फ्रेम, tread र मनका रूपमा विवरण समावेश छ।
Tubeless, रिम र टायर खाली ठाउँ बीच भएको IE।
हामी मौसमी प्रकार कुरा भने, टायर निम्न प्रकार भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ:
सुक्खा र न्यानो मौसम मा संचालित पर्छ भनेर गर्मी नमूनाहरू;
विशेष tread संग, सुसज्जित जाडो टायर कम तापमान अवस्था र बाटोको निम्ति को Icing अन्तर्गत आवश्यक छ कर्षण, सुधार;
सिजन नमूनाहरू, जो सबै मौसम अवस्थामा सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ।
किन दबाव टायर निगरानी?
ज्ञात, आफ्नो हातमा पाङ्ग्रा टायर मात्र होइन मरम्मत गतिविधिहरु समावेश छ। यो पनि नियमित रूपमा प्रदर्शन पर्छ भनेर प्रक्रिया समावेश - यो जाँच टायर भित्र हावा दबाव छ। को पाङ्ग्राहरू को हावा बिस्तारै गायब छ रूपमा यसको कार्यान्वयन को आवृत्ति, ड्राइभर र यसको यात्रु को सुरक्षा निर्भर, र यो एउटा आपतकालीन हुन सक्छ।
एक विशेष यन्त्र टायर मा दबाव नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ कि - आधुनिक बिजुली पंपों को डिजाइन सामान्यतया दबाव गेज समावेश छ। साथै, यो छोटो प्रक्रिया मात्र ड्राइभिङ प्रक्रिया रक्षा छैन, कि तर पनि किनभने आवश्यक भन्दा बढी खपत एक गरिबी देखावटी टायर र वाहन इन्धन को, ईंन्धन को एक भाग राख्न ध्यान दिनुहोस् महत्त्वपूर्ण छ।
जब यो एक टायर परिवर्तन गर्न आउँछ?
हामी तपाईंलाई तथाकथित गर्मी टायर हटाउन आवश्यक वर्ष को के समय कुरा भने, सबै बाहिर मौसम मा सम्पूर्ण निर्भर गर्दछ। यो हुन र गर्न सक्छन् शहरी वातावरण कृषि बाट केहि फरक छ कि सम्झना गर्न, त्यसैले जाडो टायर संग पाङ्ग्रा सुसज्जित महत्त्वपूर्ण छ सिर्फ एक व्यस्त सडक मा चिसो मौसम को आगमन अघि। लगभग तापमान संकेतक लागि "pereobuvaniya" आवश्यकता संकेत कि -5-6° सी
बारी मा, गर्मी गर्न जाडो टायर परिवर्तन गर्न पात्रो वसन्त तुरुन्तै पछि पर्दैन। 10 ° C धेरै दिन लामो - यो तापमान बारेमा9छ कि महत्त्वपूर्ण छ। तर धेरै लामो यो आवश्यक छैन रूपमा लागि studded टायर मा जाने: यो पहिले टायर पहनने संग fraught छ र आपतकालीन ब्रेक लगान को मामला मा खतरनाक हुन सक्छ।
काम टायर फिटिङ लागि सामाग्री
निस्सन्देह, तपाईंले हरेक मोटरहाक्ने व्यक्ति सधैं जस्तै उपकरण को एक न्यूनतम सेट हुनुपर्छ एक रेन्च, विभिन्न आकार र यति मा को टाउको। तर हामी पाङ्ग्रा प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने बारे कुरा भने आफ्नो हात अवस्थित छैन संग टायर लागि मुख्य उपकरण रूपमा कुनै यस्तो कुरा हो, यसलाई आवश्यक धेरै उपकरण छ छ :
ज्याक वाहन उचाल्न आवश्यक;
प्रमुख बेलुन-प्रकार पाङ्ग्रा देखि बोल्ट हटाउने लागि आवश्यक;
जो दबाव नियन्त्रण गर्न साथ दबाव गेज;
पम्प (एक विकल्पको रूपमा - खुम्च्याउने) को सिलिन्डर भर्न;
डाँडाको रूपमा उल्लेख भएको ब्लेड माउन्ट। यो उपकरण तपाईं कुनै पनि समस्या बिना पाङ्ग्रा देखि टायर हटाउन अनुमति दिन्छ।
साथै, सारा प्रक्रिया एक साबुन समाधान (केही कार मालिक सिलिकन स्नेहक प्रयोग गर्न रुचि) को प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ सुविधा।
क्षतिग्रस्त पाङ्ग्रा को निराकरण
फ्रेम संग मरम्मत कार्य प्रदर्शन गर्नु अघि, टायर वाहन देखि सँगै हटाउन पर्छ। यस्ता meroprityatiya अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ज्याक र balonnik जस्ता उपकरण छ। एक स्तर स्थानमा मात्र सिफारिस सबै काम, र यदि एक निश्चित पूर्वाग्रह छ, त्यसपछि पाङ्ग्रा अन्तर्गत केही समर्थन वरिपरि बार लाउनु गर्न आवश्यक छ।
यसबाहेक, टायर क्षतिग्रस्त छ जो मा छेउमा, यो एक ज्याक प्रयोग उठाएर गर्नुपर्छ। ठूलो उचाइ हासिल गर्न आवश्यक छैन, यो टायर जमीन माथि 3-4 सेमी थियो कि पर्याप्त छ। कि पछि, पागल वोल्ट नट आदि खोल्नु र पाङ्ग्रा हटाउन सक्नुहुन्छ balonnika को मद्दतले।
यो सबै घटना पनि यस्तो टायर रूपमा प्रक्रिया लागू हुन्छ। आफ्नो हात रेखाचित्र घटना चाँडै र सही, तल दिइएको सिफारिसहरू द्वारा निर्देशित हुनुपर्छ थियो मर्मत गर्न त साधारण मोटरहाक्ने व्यक्ति बनाउन काम को सम्पूर्ण प्रक्रिया, धेरै समस्याग्रस्त छ।
प्रतिस्थापन टायर को प्रक्रिया
मुख्य कठिनाइ टायर समयमा खडा जो एक टायर देखि रिम को जुदाई संग सम्बन्धित छ। यो गर्न, उनको व्यापक अनुहार प्रयोग गरेर, विशेष ब्लेड प्रयोग गर्नुहोस्। सबै प्रक्रियाहरु छरितो हो कि, रिम भागहरु राम्रो स्लाइडमा एक साबुन-आधारित वा सिलिकन तेल पूर्व-moistened गर्न सिफारिस गरिएको छ।
आफ्नो हातमा टायर - घटना बरु अरोचक र कहिलेकाहीं लामो। नियम, प्रदर्शन मुख्यतया कलाकार को कौशल र धैर्य मा निर्भर गर्दछ।
पुरानो टायर हटाएपछि, नयाँ उत्पादन हतार बिना र दुई माउन्ट ब्लेड संग नै सिद्धान्त मा रिम धारण गर्नुपर्छ।
नयाँ टायर संग पाङ्ग्रा स्थापना
उपकरण पछि नयाँ टायर तपाईं आफ्नो ठाउँमा स्थापना गर्न र ध्यानपूर्वक सबै बोल्ट कस चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण संरचना रिम। यो लामो-दूरी ड्राइभिङ को सुरक्षा असर किनभने सबै विवरण मजबूत, आफ्नो हातले टायर प्रदर्शन, धेरै गम्भीर नजिक हुनुपर्छ। सबै भन्दा राम्रो माथि बोल्ट कस र diagonally सार्न जारी गर्न थाल्छन्। यस्तो विधि दृढता रूपमा सही पाङ्ग्रा पङ्क्तिबद्ध प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ।
मेशिन जमीनमा पूर्णतया हुँदा प्रक्रिया मात्र आवश्यक पूरा गर्नुहोस्। सबै तपाईं सकेसम्म दृढ को स्क्रू कस गर्न आवश्यक छ।
तसर्थ, हामी यो पनि सबैभन्दा मांग कर्मचारीहरु स्टेशन लागि कठिन हुनेछ, कसरी आफ्नो हात संग टायर बनाउन सामना गर्दा, यो कडाई सबै सिफारिसहरू पालन गर्न, र त्यसपछि काम को परिणाम निश्चित सकारात्मक हुनेछ र सम्पूर्ण प्रक्रिया आफ्नै मोटर चालकहरुलाई प्रदर्शन थियो निर्धारण गर्न आवश्यक छ भनेर भन्न सकिन्छ मर्मतका।
आफ्नो हातले कृत्रिम हिउँ
कसरी घर मा एक स्मोकहाउस बनाउन: प्रक्रिया को सुविधाहरू
काठ प्लांटर्स, को सजावट आफ्नो दृष्टिकोण र भूमिका
घरमा डम्बबेलनेबुला कसरी बनाउने? व्यावहारिक सल्लाह
विवरण, विशेषताहरु र उपकरण: आफ्नो हातमा ठोस लागि TROWEL
पोशाक को शैलीहरू के हुन्? क्लासिक, व्यापार र रोमान्टिक शैलीहरू
लिपोप्रोलिक कारक: संरचना, संकेतहरू, प्रयोगका लागि निर्देशनहरू, समीक्षाहरू
देवहरूको बाट साँचो उपहार। वाइन "Madera"
रगत रसायन मा अवशिष्ट नाइट्रोजन
फर pompom संग छोराछोरीको टोपी - मौसम को मारा
वाहन बीमा: प्रकार र आफ्नो मतभेद
रूसी लोक पोशाक र यसको सुविधाहरू
भोलोग्डा शहर होटल। ठेगाना, समीक्षा